Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Itoobiya. - Tilmaan Media
Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Itoobiya.
Rabshadaha kasocda Itoobiya ee soo bilowday 29 bishii June kadib dilkii heesaaga Hachalu Hundessa ayaa umuuqda inay hadda sidii hore ka yaryihiin. Waxaa magaalada caasimadda Addis Ababa lagu soo soo daabulay ciidamada millatariga iyo booliska si ay rabshadaha uga hortagaan.
Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed oo markii ugu horaysay kasoo muuqday telefishinka dowladda ayaa sheegay in ay gacanta kusoo dhigeen gacan ku dhiiglayaashii gaystay dilka Hachalu Hundessa.
“Aragtiyada naceybka xambaarsan ee ku saleysan qowmiyad ama siyaasad dalka Itoobiya wixi hadda ka dambeeya boos ugama bannaana, xoogagga doonayey iney dalka Itoobiya dhiig ku daadiyaanna waxaan u sheegayaa iney riyadoodaasi marnaba rumoobeynin” ayuu yiri Abiye Ahmed.
Dhanka kale Afhayeenka xafiiska ra’isal wasaaraha Itoobiya Billane Siyuum oo shir jaraa’id qabatay waxay sheegtay in adeegga Interneetka toddobaadka soo socda la sii deyn doono maadaamaa ay xaaladda dalka ka soo reyneyso.
Waxaa wali xabsiga kujira 35 xubnood oo mucaaradka ka tirsan oo ay kamid yihiin Jawhar Maxamed iyo Baqale Garbaa, labadan siyaasi ayaa hormuud u ah ururka mucaaradka ee lagu magacaabo “Oromo Federalist Congress”.
Waxaa ladhawrayaa tallaabada tan ku xigta ee dowladdu qaadi doonto si xaaladda loo dajiyo.
Wararkii ugu dambeeyey qaraxii saaka ka dhacay Muqdisho
Puntland: Imtixaanka Shahaadiga ah oo 16,500 u fariisteen